Global Voices teny Malagasy » Filazana Ny Fisokafan’ny Fifaninanana Hahazoana Famatsiam-bola Bitika Vaovao An’ny Rising Voices Amin’ity 2013 Ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2013 2:29 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika miora
Hatramin'ny 2007, nikatsaka ny hanampy ireo olon-tsotra, vondron'olon-tsotra, tambajotra, ary ireo fikambanana nanolo-tena hanampy ireo vondrom-piarahamoniny ao an-toerana handray anjara bebe kokoa ao anatin'ny tontolon'ny aterineto ny Rising Voices. Amin'ny alalan'ny fanomezana famatsiana ara-bola sy fiahiana ireo tetikasa madinika maneran-tany, nanohana tetikasa 35 hikendrena ny mediam-bahoaka  ny Rising Voices, any amin'ireo vazantany efatry ny glaoby. Nanampy ireo mpitarika tao an-toerana hitondra feo vaovao sy vitsy mpisolotena eo amin'ny resadresaka dizitaly eran-tany ireo tetikasa ireo, mba hitantarany ny tantarany manokana na hanazavana ireo olana goavana eo amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo.
Atomboka amin'ilay andiany 2013 amin'ny famatsiana ara-bola bitika, namolavola sehatra fiadian-kevitra vaovao  ny Rising Voices izay ahafahan'ireo mpampiasa azy mizara ampahibemaso ny heviny miaraka aminà vondrom-piarahamonina midadasika kokoa. Manokatra fahafahana tsara kokoa hikaroka tsikera sy manampy amin'ny fanamorana ny fifandraisana eo amin'ireo vondrona anatinà faritra mitovy na mifantoka aminà olana mitovy io fizotra misokatra io. Mahatsapa izahay fa hanana vokany tsara eo amin'ny vondrom-piarahamonina eran-tany io fomba fizarana hevitra vaovao io, izay mizara tanjona iraisana, dia ny tontolon'ny aterineto ifandrimbonana tanteraka sy ahitàna karazana maro kokoa.
Ny Rising Voices dia mikaroka sosokevitra ho anà tetikasa izay mizara ny andraikitray hitondra ny feo avy amin'ireo vondrom-piarahamonina vaovao, sy ireo vondron-teny zara raha misy mpisolotena eo amin'ny adihevitra eran-tany aty anaty aterineto, avy amin'ny alalan'ny fampiasàna ny mediam-bahoaka mpandray anjara. Tokony ny fanolorana atrikasa fanofanana momba ny mediam-bahoaka ho an'ny vondrom-piarahamonina nokendrena no ataon'ilay tetikasa laharam-pahamehana, sy fanohanana ary fiahiana tena ilaina mitohy. Iangaviana ianao hijery ny lisitr'ireo tetikasa tohanana an-dàlana  sy ireo taloha  hangalanao ohatra ho an'ireo tetikasa natsangana teo aloha.
Tsy voafetra amin'ireo ny hevitra mikasika ny tetikasa, ary mampirisika anao izahay hamorona, nefa tsy hivoana amin'ny zava-misy anatin'ny sosokevitra halefanao. Jereo ireo Fanontaniana Be Mpametraka Matetika  ho fahalalana fanampiny ho anao.
Raha handray anjara, manainga anao hitsidika ny pejy “Fanolorana Sosokevitra ”, izay ahitanao fanontaniana fohy afaka hanoloranao ireo hevitrao momba ny tetikasanao. Marihana fa misy fetrany ny isan'ny litera (fa tsy ny isan'ny teny) isaky ny valim-panontaniana iray.
Fihodinana voalohany – manolotra ny sosokeviny hiaingana  ireo mpandray anjara avy amin'ny alalan'ilay sehatra fiadian-kevitra ao anaty aterineto. Vantany vao navoaka io sosokevitra io, manasa ireo mpandray anjara izahay hizara ny sosokeviny amin'ny tambajotrany, ho fomba iray hangatahana tsikera sy fandraisana anjara avy amin'ny hafa. Marihana fa afaka misafidy ny hitàna ny sosokeviny ho azy manokana ireo mpandray anjara raha misy ahiahy mikasika ny fiarovana.
Aza misalasala mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny famelàna tsikera na fandefasana mailaka avy ao amin'ny Taratady Fifandraisana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/02/24/45712/
 tetikasa 35 hikendrena ny mediam-bahoaka: https://rising.globalvoicesonline.org/grantees/
 sehatra fiadian-kevitra vaovao: https://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013
 Fanontaniana Be Mpametraka Matetika: https://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/faq/
 Fanolorana Sosokevitra: https://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/submit-a-proposal/
 Taratady Fifandraisana: https://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/contact/